Ny toeram-pitrandrahana mpanjaka Solomon (ampahany 13) - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Journal succession > 2014-04 mpandimby ny Magazine > Ny Harenan'i Solomona Mpanjaka (ampahany 13)
"Izaho dia mpiady. Mino ireo kojakoja-maso-maso. Nosobako ny takolako. Tsy manaja lehilahy tsy mihemotra aho. Raha mamono ny alikako ianao, dia tokony hitondra ny sakao ho azo antoka. ”Mety mampihomehy izany teny izany, nefa amin'ny fotoana mitovy amin'izany toetra izany, ilay tompon-daka tamin'ny ady totohondry teo aloha, Muhammad Ali, dia olona iray no zarain'ny olona. Mitranga amintsika ny tsy fahamarinana ary indraindray maharary loatra izany ka mangataka valifaty isika. Mahatsiaro ho voadona izahay na toa lasa afa-baraka ary te hamaly faty. Tiantsika hahatsapa ny fanaintaintsika ny mpifaninana. Mety tsy mikasa ny hamoaka fanaintainana ara-batana amin'ireo fahavalontsika isika, fa raha afaka mampiditra fanaintainana azy ireo ara-tsaina na ara-pihetseham-po amin'ny alalàn'ny fanesoana kely isika na amin'ny fandavany ny hiresaka dia ho mamy ny famaliantsika.
"Aza manao hoe: Hamaly ny ratsy aho! Miandrasa an'i Jehovah, dia hanampy anao Izy" (Ohabolana 20,22). Tsy valifaty no valiny! Indraindray Andriamanitra mangataka antsika hanao zavatra sarotra, sa tsy izany? Aza mijanona amin'ny hatezerana sy valifaty fa manana harena sarobidy isika - fahamarinana manova fiainana. "Miandrasa ny Tompo". Aza mamaky teny haingana loatra. Saintsaino ireto teny ireto. Tsy izy ireo ihany no lakilen'ny fiatrehana ireo zavatra izay miteraka fanaintainana sy lolompo ary fahatezerana, fa izy ireo dia ivon'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra.
Saingy tsy te hiandry mihitsy izahay. Amin'ny vanim-potoana fisotroana kafe-to-go, SMS ary Twitter, irintsika ny zava-drehetra sy avy hatrany. Halantsika ny fitohanan'ny lozam-pifamoivoizana, ny filaharana ary ny mpangalatra fotoana hafa. Dr. James Dobson dia manoritsoritra izany toy izao manaraka izao: “Nisy fotoana tsy nitandremanao na dia tsy hitan'ilay sarety aza. Volana iray taty aoriana dia noraisinao. Raha tsy maintsy miandry ny fisokafana amin'ny varavarana mihodina ianao dia mitombo ny hatezerana! "
Ny fiandrasana, araka ny voalaza ao amin'ny Baiboly, dia tsy misy ifandraisany amin'ny fikorotanan-nify amin'ny kiririoka tsena. Ny teny hebreo miandry hoe "qavah" dia midika hoe fanantenana, manantena zavatra ary tafiditra ao ny foto-kevitra momba ny fiandrasana. Ny fiandrasana ny ankizy miandry ny ray aman-dreny mba hifoha amin'ny maraina Krismasy ary avelao izy ireo hanokatra ny fanomezana ho azy ireo dia maneho ity fanantenana ity Mampalahelo fa very ny dikany ny teny hoe fanantenana. Izahay dia miteny toy ny hoe "Manantena aho fa hahazo ny asa." Ary "Antenaina fa tsy ho orana rahampitso." Fa io karazana fanantenana io dia tsy misy fanantenana. Ny foto-kevitra momba ny fanantenana ara-Baiboly dia fanantenana azo antoka fa hisy zavatra hitranga. Misy zavatra antenaina hitranga amin'ny fahatokiana feno.
Hitsangana ve ny masoandro?
Taona maro lasa izay dia nandany andro nitsangatsangana an-tendrombohitra tany Drakensburg (Afrika Atsimo) aho. Ny harivan'ny andro faharoa dia nandraraka siny izy ary rehefa nahita zohy aho dia lena mando ary toy izany koa ny boaty afoko. Ny torimaso dia tsy nisy resaka ary tsy handeha ny ora. Reraka aho, nivaingana ary tsy afaka niandry ny fiafaran'ny alina. Nisalasala ve aho fa hiposaka indray ny masoandro ny ampitso maraina? Tsia mazava ho azy! Niandry tsy am-paharetana ireo famantarana voalohany amin'ny fiposahan'ny masoandro aho. Tamin'ny efatra maraina dia niseho tamin'ny lanitra ny tadin'ny hazavana ary nipoaka ny andro. Nikiakiaka ireo vorona voalohany ary azoko antoka fa hifarana tsy ho ela ny fahoriako. Niandry aho tamin'ny fanantenana fa hiposaka ny masoandro ary hiposaka ny andro vaovao. Niandry ny haizina hamindra ny mazava aho ary ny hatsiaka hosoloin'ny hafanan'ny masoandro (Salamo 130,6). Izany indrindra no atao hoe fiandrasana amin'ny hevitry ny Baiboly. Fa ahoana no tena andrasanao? Ahoana no andrasanao ny Tompo? Ataovy fantatry ny tenanao hoe iza Andriamanitra. Fantatrao izany!
Ny Taratasy ho an’ny Hebreo dia mirakitra ny sasany amin’ireo teny mampahery indrindra ao amin’ny Baiboly momba ny toetran’Andriamanitra: “Aoka ianareo ho afa-po amin’izay misy ao. Fa hoy ny Tompo: "Tsy hahafoy anao na hahafoy anao Aho"". (Hebreo 13,5). Araka ny voalazan’ny manam-pahaizana grika, io andalan-teny io dia nadika tamin’ny teny hoe: “Tsy handao anao mihitsy aho na oviana na oviana, na oviana na oviana, na oviana na oviana, na oviana na oviana, na oviana na oviana, na oviana na oviana.” Fampanantenana avy amin’ilay Raintsika be fitiavana tokoa izany! Marina izy ary tsara. Inona àry no ampianarin’ny Ohabolana 20,22 antsika? Aza mamaly faty. Miandrasa an'Andriamanitra. Ary? Izy no hanavotra anao.
Voamarikao ve fa ny sazy ho an'ny fahavalo dia tsy voalaza? Ny famonjena anao no tena ifantohana. Izy no hamonjy azy. Mampanantena izany! Andriamanitra no hikarakara azy. Hataony miverina amin'ny làlana marina ny zavatra rehetra. Hanazava izany amin'ny fotoanany sy amin'ny fombany izy.
Tsy ny hananana fiainana pasifika na ny fiandrasana an'Andriamanitra hanao ny zavatra rehetra ho antsika. Tokony hiaina mahaleo tena isika. Raha mila mamela heloka isika, dia mila mamela heloka. Rehefa mila miatrika olona isika dia mifanatrika olona iray. Raha mila mikaroka sy manontany tena isika dia manao izany koa. Tokony hiandry ny Tompo i Josef, fa raha mbola niandry izy dia nanao izay azony natao. Ny fihetsiny tamin'ny toe-javatra sy ny asany no nahatonga ny fampiroboroboana. Tsy mavitrika Andriamanitra rehefa miandry isika, fa miasa any ambadiky ny sehatra iainana mba hanambatra ireo sombintsombiny rehetra izay tsy mbola ao. Amin'izay ihany izy vao hanatanteraka ny faniriantsika, ny faniriantsika ary ny fangatahana.
Zava-dehibe amin'ny fiainantsika amin'Andriamanitra ny fiandrasana. Rehefa miandry an’Andriamanitra isika, matoky Azy, manantena Azy ary miandry Azy. Tsy very maina ny fiandrasana antsika. Ho hita maso izany, mety ho hafa noho ny nantenaintsika. Ho lalina kokoa noho ny eritreretinao ny zavatra nataony. Apetraho eo an-tanan'Andriamanitra ny faharatranao, ny hatezeranao ary ny tsy fahafalianao. Aza mitady valifaty. Aza mandray an-tànana ny fahamarinana - asa an'Andriamanitra izany.